Shiinaha Runjin © Krunt ™ -G4 Soosaarida Mashiinka Badeecada Soosaarka iyo Warshadda | Runchen
Buuxinta jalaatada, sorbet iyo wax soo saarka barafka biyaha ee kooniska, koobabka iyo weelasha waaweyn ee naqshadaha kala duwan, qaabka iyo cabirka badan.
Koobabka, koorta ama weelasha waaweyn waxaa mid mid looga siinayaa qalabka wax lagu kala iibsado waxaana lagu ridayaa lamellas, diyaarna u ah buuxintiisa.
Buuxinta jalaatada, sorbet ama barafka biyaha waxay ku dhacdaa iyadoo la adeegsanayo mid waqti buuxiya, buuxiyaha mugga ama buuxinta sheyga. Marka laga hadlayo jalaatada la soo saaray, farsamaynta goynta ayaa sidoo kale lagu daray.
Qurxinta dhowr nooc oo kaladuwan ama maaddooyin adag ayaa suurtagal ah waxaana jira qalab qurxin ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo loo heli karo Runchen Krunt-G4.
Shaqada daboolka ayaa laga dooran karaa dhowr farsamooyin la heli karo, iyadoo kuxiran qaabeynta sheyga, sidoo kale kuleylka kuleylka adoo adeegsanaya foornada horay loo gooyey waa macquul.
Ka dib marka la shaabadeeyo oo la daboolo alaabada ayaa laga qaadayaa lamellas waxaana loo wareejiyaa suunka xawilaadaha. Nidaamyada maaraynta otomaatiga ah, tusaale ahaan, qayb wareejin-iyo-boos, waa la heli karaa.
Mashiinka Aasaasiga ah
Runchen Krunt-G4 waxaa lagu dhisay bir adag oo birta ka sameysan. Mashiinka wax lagu buuxiyo waxaa loogu talagalay inuu la kulmo heerka nadaafadda ee ugu sarreeya, oo ay ku jiraan qaab furan oo furan kaas oo ka fogaanaya dabinnada biyaha una oggolaanaya nadiifinta tuubbada hoos u dhaca. Fujiyeyaasha lagu buufiyo nadiifinta lamella ayaa sidoo kale lagu daray inay yihiin qalab caadi ah.
Silsilado lacag la'aan ah, silsilado wax lagu xambaaro oo birta xarkaha leh oo xaddigeedu yahay 70mm waxay qaadaan lamellasyada oo lagu dhejiyo silsiladaha iyadoo loo adeegsanayo "furin dhaqso ah" oo loogu talagalay isbeddel sahlan.
Dhammaan xarumaha shaqada ee sare waxay ku rakiban yihiin biraha, iyadoo aan la hagaajin godadka u oggolaanaya fududaynta iyo deg-degga deg-degga ah ee saldhigga iyada oo aan la adeegsan qalab.
Dhammaan buuxinta, qurxinta iyo qalabka kaabayaasha ah oo ay kujiraan nozzles, tuubbooyin, saldhigga wadista iwm waxaa loogu talagalay kala-goyn fudud oo dhakhso leh badeecada fudud ee beddelka iyo nadiifinta waxtarka leh. Mashiinka waxaa lagu heli karaa laba garoon oo kala duwan oo tilmaamaya. Mashiinka leh heerka wax kalabixinta ee 140mm waxaa loogu talagalay alaabooyinka yaryar halka mashiinka leh dhejiska dhejiska ee 210mm uu xamili karo xajmiga qoyska iyo weelka waaweyn. Looma baahna in la beddelo silsiladaha marka la beddelayo qaabka lamellas ee kala duwan.
Mashiinka qalabka korontada ku shaqeeya ee isdaba-joogga ah ayaa kaxeeya kaamka weyn ee kiciya koobka ama qalabka wax lagu rito iyo ejector. Dhaqdhaqaaqa toosan ee gawaarida lamella waxaa farsamo ahaan looga waafajinayaa wadida weyn iyadoo la adeegsanayo habka tusmeynta.
Cod-bixiye ayaa siiya calaamad PLC si loogu xakameeyo saxda ah dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa hawada.
Runchen Krunt-G4 waxaa lagu xakameynayaa nidaamka kontoroolka dhexe ee PLC. PLC waxay suurtogal ka dhigeysaa in la helo xakameyn sax ah iyo is-beddel sahlan oo u dhexeeya alaabada. PLC waxay u oggolaaneysaa bilawga iyo xirida otomaatigga ah, waxaana ku qalabeysan meel lagu keydiyo xogta 2MB oo u oggolaaneysa tiro badeecooyin horay loo sii qorsheeyay.
Xogta wax soo saarka waxaa lagu soo bandhigayaa guddiga taabashada gacanta si hawlgal fudud iyo dabagal loogu sameeyo.
Nidaamka Tifaftirayaasha Hawada iyo Vacuum
Sababo la xiriira nadaafad ahaan dhammaan qaybaha pneumatic-ka waxaa loo sameeyaa waxyaabo ka hortagga wax-u-qabashada, saliidda-saliidda-la'aan. Dhammaan fureyaashu waa koronto-dhaliyeyaal kursiga korantada ku shaqeeya waxaana lagu dhisay qafis bir bir ah oo ka sarreysa mashiinka.
Faakiyuumka loo baahan yahay ee koobka, weelka iyo fidinta daboolka waxaa laga helaa qalabka loo yaqaan 'venturi valves'.
Faa'iidooyinka Dheeraadka ah ee Mashiinka
Qaab-dhismeedka Deggan ee Dheer iyo Dheer
Dhererka mashiinka waxaa loo kordhiyay 5m si loo helo boos dheeraad ah oo loogu talagalay hawlgalka gacanta iyo boosas badan oo saldhigyo shaqo oo dheeri ah. Taageerada qaabdhismeedka mashiinka waxaa laga kordhiyay 4 gogo 'ilaa 6 gogo' taasoo xoojineysa awooda mashiinka ee socodka wadista.
Gawaarida gawaarida gawaarida ee Saldhigga Buuxinta
Siemens S7-300 PLC wuxuu ku qalabeysan yahay mashiinka caadiga ah, mashiinka gawaarida gawaarida ee saldhigga buuxinta waa lagu dari karaa iyada oo aan wax laga badalin. Dhaqdhaqaaqa buuxinta waxaa lagu qorsheyn karaa iyada oo loo marayo guddiga howlgalka si loogu ekeeyo noocyada kala duwan ee qalooca kaamerada, xogta qalooca waa la keydin karaa lana soo celin karaa. Tani waxay ka dhigeysaa badeecadda beddelka iyo hal-abuurnimada mid aad u habboon.
Xakamaynta Heerkulka Nidaamka Shukulaatada
Nidaamka kuleylka iyo nidaamka xakamaynta heerkulka ee ku-buufinta shukulaatada iyo nidaamka sare waa naqshad caadi ah si looga fogaado shukulaatada ku xayiran heerkulka hoose ee deegaanka.
Saldhigga Kala-hagaajinta Daboolka
Qeyb dheellitir fure dheeri ah ayaa lagu lifaaqay si loo hagaajiyo xasilloonida saxnaanta daboolka si loo hubiyo tayada sheyga.
Mashiinka aasaasiga ah ee Runchen Krunt-G4 ayaa la siin karaa qalab kala duwan oo loogu talagalay koob, koon ama buuxinta weelka. Jaangooyada caadiga ah ee nooc kasta oo wax soo saar ah ayaa hoos ku taxan:
Buuxinta Weelka Jumlada
Jumlada / Qalabka Weelka
Shukulaatada la buufiyo
2 dhadhan qiyaasta jalaatada leh adeegga adeegga
2isbaarooyinka lagu dhajiyo maraqa dushooda
2 nooc oo saldhig bamka ah
Qalab maaddooyinka qalalan
Koorta warqad ku farxaya
Ka bixitaan toos ah
Wareejiye loogu talagalay koorta
2 isbaarooyinka dhaafitaankaDabooliyaha
Marka lagu daro qalabka caadiga ah, noocyo kala duwan oo qalab ikhtiyaari ah ayaa loo heli karaa fidinta, buuxinta iyo qurxinta. Tani waxay awood u siineysaa in la soo saaro alaabooyin kala duwan.
Doser 2 jalaato oo dhadhan buuxa ka kooban buuxinta
Qiyaasta 2 jalaato oo dhadhan ah buuxinta dabaysha
Qiyaasta loogu talagalay jalaatada buuxinta buuxinta
Qiyaasta loogu talagalay jalaatada murqaha leh ee buuxinta buuxinta
Qiyaasta jalaatada oo lagu daro
Qaybta qurxinta Qalabka qalinka
Mashiinka wax lagu calaliyo ee xanjada
O-suunka gudbiyaha O-suunka Pick & aaladda meesha
Fiirsada Extrusion oo ay kujirto qalabka goynta goynta qabow Qaybta kuleylka ee ikhtiyaariga u ah goynta siligga
Wareegista qalabka jajaban ee loo yaqaan 'extruder'
Qaybta qurxinta Qalabka qalinka Qalabka Qalabka Liumarka
Qiyaasta budada Cocoa Xanjada qaybiyaha Calaamadaha kuleylka - horay-u-jar bireed Dome daboolka qeybiye Koobka daboolka
Daboolka daboolka ee daboolka aan dabakhmi karin Qalabka wareejinta daboolka aan lahayn
Daboolaha Daboolka Taariikhda sifeynta gudbiyaha
Xullo & dhig qalab
Doser loogu talagalay jalaatada dhadhanka 2 ee buuxinta isku midka ah
Khatimidii kuleylka - foornada horay loo gooyay Furka daboolka qaybiyaha qaybiyaha Koobka daboolka
Daboolka daboolka Taariikhda sireed
Si loo hubiyo waxqabadka mashiinka, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qaybaha asalka ah oo si fudud loo dalban karo iyadoo la raacayo buuga qalabka dayactirka. Si macmiilka looga caawiyo hagaajinta keydka qalabka dayactirka, Mashiinka buuxinta Runchen Krunt-G4 waxaa loogu talagalay inuu adeegsado inta badan qaybaha isku habboon ee suuqa ku jira, oo ay ku jiraan 140mm garoonka lamellas, saldhigyada shaqada, qaybaha qaabdhismeedka, qaybaha wadista tusaale ahaan jeex jeex iyo silsilad, qalabka kululaynta iyo iwmLaakiin waxaa si xoog leh loo soo jeedinayaa in lagu xaqiijiyo Runchen ka hor inta aan la isticmaalin qaybaha isku habboon si looga fogaado waxyeello u geysta mashiinka.
Tirada haadadkaTixraaca garoonka Wax soo saarka caadiga ah (kumbiyuutarada / h) Tirada saldhigyada Xawaaraha farsamada (stroke / min) Ugu badnaan cabirka sheyga koontada Korantada lamella Maya.
Wax soo saarka leydilaadka: mm
inch koob laydh ah
Ugu badnaan soo saar dherer: Koob
4 haad140 / 5.5 ”1030030
3 haad140 / 5.5 ”760030
2 haad140 / 5.5 ”520030
3 haad280/11 ”480020
2 haad280/11 ”340020
1 haad280/11 ”210020
Qalabka shukulaatada Mugga Weelka Qaadashada mugga halkii cutubQurxinta daahan 14Litre （3.7 US Gals） × 2 2-6ml (0.07-0.20 fl. Oz.)4-8ml (0.14-0.28 fl. Oz.)
Capacity Awoodda dhabta ah waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood, oo ay ku jiraan qaabka iyo mugga sheyga iyo sidoo kale qaababka buuxinta iyo daboolidda.
Isticmaalka cadaadiska shaqada
Mashiinka ugu muhiimsan Adeegga Mashiinka Mashiinka wareegaya
Kuleylka kuleylka gudbiyaha suunka
ikhtiyaari ikhtiyaari ah
heerka caadiga ah ee caadiga ah
Ma jiro wax saliid ah, waxa ku jira biyaha ≤ 2.0g / cu.m 6bar (87 psi)2.5 cu.m / min 3 × 380V / 50Hz
Marka loo eego codsashada macaamiisha
Qaabeynta Standard Lamellas
[A1] 140 garoonka 4 alaab wareeg ah [B1] 140 garoonka wax soo saarka 4-leydi leenka ah
[A2] 140 garoonka 3 haad wareegsan oo alaab ah [B2] 140 garoonka 3 layn wax soo saar leydi
[A3] 140 xarago 2 haad oo wareeg ah [B3] 140 garoonka 2 layn wax soo saar leydi
[A4] 280 garoonka 3 layn oo wareegsan oo alaab ah [B4] 280 garoonka 3lanes wax soo saarka leydi
[A5] 280 garoonka 2 layn oo wareeg ah oo alaab wareega ah [B5] 280 garoonka 2 layn wax soo saarka leydi
[A6] 280 garoon 1 haad wareeg ah [B6] 280 garoonka badeecada laydiga layd ah
[A1] lamellas waa qaabka caadiga ah ee mashiinka caadiga ah, saldhigyada shaqada ee qalabaysan sidoo kale waxay la jaan qaadayaan [A1] lamellas.
Mm 140mm ama 280mm lamellas sidoo kale waa la heli karaa iyadoo la raacayo codsiga macaamiisha.
※ 210mm lamellas iyo silsilado ayaa la heli karaa iyadoo la raacayo codsiga macaamiisha
Qalab fidiyaha & KoobkaWaxqabadka xasilloon, waxyeello uma geysanayso qalabka wax lagu duubo.
Mashiinka wax lagu buufiyo iyo Shukulaatada lagu buufiyoAtomisyada labiska, xakamaynta mugga wax ku oolka ah. Kuleylka khadka soo noqoshada iyo buufinta buufinta si looga fogaado shukulaatada ku dheggan.
Servo Drive ee Nidaamka BuuxintaGariir hoose iyo buuq, saliid la'aan. Si fudud u beddel xogta qalooca iyada oo loo marayo guddiga xakamaynta alaabooyinka cusub ee ikhtiraaca iyada oo aan kharash dheeraad ah lagu darin.
Hore: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Mashiinka Buuxinta Rotary Ice Cream
Xiga: Runjin © Krunt ™ -N50 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Runjin-Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Fillin ...